Fil d'actualités du 20/08/2019
20/08/2019 - 15:30 : RODOBEN'NY MPANOHITRA:nanatanteraka ny fivoriana voalohany androany 20 Aogositra izay notarihin’ny filohany Marc Ravalomanana filohan’ny rodoben’ny mpanohitra ho an’ny DEMOKRASIA . Nanatrika izany avokoa ireo filoha lefitra isaky ny faritany eto Madagasikara ary ireo birao mandrafitra ny RMDM.
20/08/2019 - 15:00 : BONGOLAVA:Nidina hifotony nijery ilay lalana nihotsaka teny Ihazomay ireo olom-panjakana eo anivon'ny Faritra Bongolava izay notarihan'Andrimatoa Lehiben'ny Faritra Bongolava, ny préfet an'i Tsiroanomandidy ary ny avy ao amin'ny travaux publics eto Bongolava. Anomboka tsy ho ela ny asa fanarenana.
20/08/2019 - 14:00 : FANENTANANA HO AN'NY MPITATITRA:Ny ATT dia mamoaka naoty ho fanentanana ny mpitatitra olona rehetra manerana ny Nosy mba hifarimbona amin'ny fitaomana ny olona avy any amin'ny faritany hamonjy ireo fotoana lehibe iarahana amin'i Papa François.
20/08/2019 - 11:30 : SOSIALY:Tonga nijery ny asa fanamboarana ny lalana sy ny lalakely ary fanatsarana sy fanomezana.endrika.ny tanana teny Tsiadana boriborintany faha 2 kaominina Antananarivo Renivohitra ny ben'ny tanana Lalao Ravalomanana ny maraina teo.
20/08/2019 - 11:00 : FITANTANANA NY HARENA VOAJANAHARY:Hatao ao genève sy soisa amin'izao fotoana zao ny fivoriana andihan'ny faha 71 ataon'ireo sampadraharaha iraisam-pirenena mitantana ny varotra harena voajanahary,anisan'ny mandray anjara amin'izany i Madagasikara.
20/08/2019 - 10:30 : NANISANA:mpiasa iray no namohy ny ainy tototry ny tany tetsy nanisana omaly.
20/08/2019 - 10:00 : ANTALAHA:Tovolahy 14 taona nisy tafaporitsaka teny ampelatanan'ny mpagalatr'olona,ra araka ny fitantarany dia nisy dimy lahy izy ireo fa izy no tafavoaka.
20/08/2019 - 09:30 : JIRAMA:Misy fikorontanana ny famatsiana RANO anio Talata 20 Aogositra 2019 nanomboka tamin'ny maraina teo eny amin'ny faritra: Mamory - Tanambao Andafiavaratra - Fitroafana - Mandrosoa - Maibahoaka - Antanetibe - Talatamaty - Ambohitravao - Faralaza - Ankadivory - Ambohinambo - Amborompotsy - Imerinafovoany - Tanjondava - Ankadivory - Ambohijanahary - Ankadindravola - Ivato Tanana - Ivato pharmacie - Mandriambero - Ambohidratrimo - Soamanandray - Alakamisy - Anosiala - Andranomanga.Antony: misy asa fanamboarana tsy maintsy atao ao amin'ny Toby famatsian-drano eny Faralaza.
20/08/2019 - 09:00 : LOZAM-PIFAMOIVOIZANA:Misy lozam-pifamoivoizana miseho amin'izao fotoana izao etsy 67ha,fiara D4D iray nidona tamin'ny tambo iray araka ny fampitam-baovao azo dia tsy nisy ny aina nafoy.
19/08/2019 - 16:00 : FANDRAHARAHANA:Ho tanterahina etsy amin'ny CCI Ivato ny 17katramin'ny 20 septambra ny fiaonamben'ny mpampiasa vola eto Madagasikara ka mpandraharaha avy any ivelany mihoatra ny 50 no ho avy.
Archive du 20181030
Marc Ravalomanana “Hakarina ny fahefa-mividin’ny Malagasy”
Tanàna maro amina faritra telo dia Amoron’i Mania, Matsiatra ambony ary Menabe no nanaovan’ny Kandida laharana faha-25 fampielezan-kevitra ny andron’ny omaly.
Mpanakorontana ny propagandy Hosamborina avy hatrany
Tapitra omaly alatsinainy 29 oktobra ilay 72ora nomen’ny kandida filoham-pirenena miisa 25 ny CENI sy ny fanjakana hanokafana indray ny lisi-pifidianana noho ny fahitan’izy ireo fa misy tsy mangarahara sy feno hosoka, ankoatra ny anarana maro tsy tafiditra, ka mila diovina ny lisitra.
Fanaraha-maso ny fifidianana Tonga koa ny SADC
Nampafahafantarin`ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) tamin’ny besinimaro ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin`ny vondrona SADC,
Fanjakana Amerikanina “Aleo hajaina ny datim-pifidianana”
Nitsidika am-pomba fifanajana ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao teny amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra omaly alatsinainy 29 oktbra maraina ny mpiraki-draharahan’ny masoivoho Amerikanina eto amintsika, Atoa Stuart Wilson.
Maitre Willy Razafinjatovo “Aoka hanapa-kevitra ireo mpilatsaka hofidiana !”
Manoloana ny zava-nitranga teto amin’ny firenena ny faran’ny herinandro teo, teo amin’ny tontolon’ny fampielezan-kevitra eto Madagasikara dia naneho ny heviny mikasika ny fahitany ny toe-draharaha amin’ny maha mpahay lalàna azy ny mpisolovava, Willy Razafinjatovo na Olala.
Edito Very raha mihemotra
Azo lazaina ho efa farahidiny ny fiainantsika Malagasy ankehitriny.
Nentiny any ivelany ny fianakaviany Miomana amin’ny rotaka sy krizy Rajoelina ?
Tsy fahita firy amin’ny fifidianana ny fisian’ny kandida iray mandeha mivoaka ny firenena ao anatin’ny fotoana azo faritana ho kihon-dalana amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra.
Zanak’i Dada Mahavita mandresy lahatra ny mpifanandrina aminy
Mafana ny resaka politika ankehitriny ary misy fiantraikany amin’ny fiainam-piarahamonina. Niaraha-nahita sy nandre ny resaka fihantsiana sy herisetra niafara tamin’ny famoizana ain’olona,
Tanora Malagasy Mitombo isa ireo resy lahatra amin’i Dada
Tsikaritra tao anatin’izay telo herinandro nisian’ny fampielezan-kevitra izay fa tena tomefy olona hatrany izay toerana na kaominina an-drenivohitra io ka fokontany kely any ambanivohitra lalovan’ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana.
Kandida manatobaka volabe Tokony hanokafana fanadihadiana, hoy ny VAMI
Efa ela izahay no niteny ny tsy fetezan’izao fifidianana izao, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko politika VAhoaka MIray (VAMI), Gaby Vakiniadiana.
Fanakorontanana ny TIM tao Antsirabe Tra-tehaka ny fanaraman’ny MAPAR mersenera
Tena misy ary tsy kihonohono ny fampiasana vola amin’izao andron’ny propagandy izao. Ankoatra ny mety fanaramana ny olona hanao propagandy sy hividianana ny safidiny amin’ny latsa-bato,
Kick Boxing Tontosa ny Fantomas andiany faha-2
Tontosa tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina tamin’ny alahady 28 oktobra 2018 teo ny fifaninana kick boxing “FANTOMAS” andiany faha-2 nokarakarain’ny fikambanana’ireo mpanorina ny taranja kick boxing eto Madagasikara.
Zon’ny mpanabe Harafitra ho lalàna
Tsy hanaiky fotsiny amin’izao fa handrafitra ho lalàna ireo zo tokony homen’ny fanjakana azy ireo mpampianatra mivondrona ao anatin’ny fikambanamben’ny mpanabe manerana ny Nosy.
Sekoly ambony UPRIM Hanampy ireo mpianatra vao afaka baka
Vonona ny hanampy ireo mpianatra vao afa-panadinana Bakalôrea eto amintsika ny sekoly ambony UPRIM. Lalam-piofanana miisa dimy raha araka ny nambaran’ny filoha tale jeneraliny Ramatoa Nadia Rakotovaoarison no hatolony dia ny “gestion et management”,
Minisiteran’ny Indostria Hilofo hatrany hampandrosoana ny sehatra tsy miankina
Ho fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina dia nisy omaly alatsinainy 29 oktobra ny fifanatonana sy fifampiresahan’ny fanjakana sy ny tsy miankina (dialogue publique-privé) tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy.
Mirongatra indray ny fitsaram-bahoaka tao aorian'ny tranga tany Fenerivo atsinanana.
Namoaka fanambarana ry zareo avy eo anivon’ny fikambanan’ny Tanora Mandray Andraikitra (TMA) fa manohitra tanteraka ny herisetra.
Ho an’ny rahampitso alarobia 31 septambra, dia hihaona amin’ny vahoakan’Imerintsiatosika i Marc Ravalomanana,
Mpanao asa tanana Mikolay amin’ny tsy fisian’ny tsena
Mikolay amin’ny tsy fisian’ny tsena ireo mpanao asa tanana Malagasy eto amintsika.
Marovoay Gara Tontosa ny Tournoi KMMR Moramanga
Vita ny alahady 28 oktobra teo, tao amin’ny kianja Marovoay Gara Kaominina Morarano Gara RN 44, ny famaranana lalao baolina kitra nokarakarain'ny TIM Marovoay Gara ka nampitondraina ny anarana « Tournoi KMMR Moramanga ».
Tolagnaro Tafakatra 600Ar ny kapoakan’ny vary
Niakatra ho 600Ariary efa ho hateloana ny kapoa-bary ao Tolagnaro renivohitra. Mbola mihoatra noho io ny vidiny any amin’ireo kaominina manodidina somary ambanivolo.
Tompona orinasa eto Madagasikara Sahirana mitady olona manana traikefa
Notanterahina tetsy amin’ny hotely Le Pave omaly alatsinainy 29 Oktobra ny hetsika fampirantiana ahafahana mampifandray ny asa sy ny fianarana.